Ilaha suuqgeyneed loo dhan yahay si loo xoojiyo fariinta astaantaada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Ilaha suuq-geyneed loo dhan yahay si loo xoojiyo fariinta astaantaada
Ilaha suuq-geyneed loo dhan yahay si loo xoojiyo fariinta astaantaada
Ogaanshaha dhagaystayaashaada iyo waxa ay rabaan ayaa had iyo jeer ahaa tiirka suuq-geynta, laakiin halbeegga casriga ah, ololayaasha guuleysta ayaa koray si loogu daro waxa dhageystayaashaadu sidoo kale daneeyaan.
Macaamiishu hadda kuma codeeyaan summada ama badeecadaha iyagoo soo iibsanaya. Hadda, waxay sidoo kale u codeynayaan mustaqbalka ay jeclaan lahaayeen inay arkaan dunidu u dhaqaaqdo - mustaqbalka kaas oo isbeddelka cimilada wax laga qabanayo, qarniyo badan oo dhaqaale-bulsheed iyo caddaalad-darro jinsiyadeed ayaa la saxayaa iyo sinnaanta iyo isku-dhafka ayaa diyaar u ah dhammaan.
Tani waxay ka dhigan tahay in qiyamka summadadu ay hadda qayb ka yihiin goobtaada iibka ee gaarka ah - iyo haddii aadan kor u qaadin qiyamka la jaan qaadaya dhagaystayaashaada, waxay u badan tahay in mid ka mid ah tartamayaashaada uu sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, suuqgeyn loo wada dhan yahay kaliya maahan xeelad lagu hagayo daawadayaasha. Waa halkan in aan hoosta ka xariiqno halgankii guud iyo dadnimadii ina soo maray innagoo aqoonsaneyna oo aan u dabbaaldegeyno kala duwanaanshaheenna.
Waxa kale oo ay kaa caawin kartaa in ay ku riixdo astaantaada ujeedooyinkeeda ganacsi: In ka badan saddex-meelood laba meel (67%) jawaab-bixiyeyaasha daraasadda Edelman ayaa sheegay in ay ka iibsadeen calaamad markii ugu horeysay sababtoo ah waxay ku heshiiyeen mowqifkeeda mawduuc muran leh, halka 65 % waxa ay sheegeen in aanay ka iibsanayn calaamad marka ay ka aamusaan arrimaha ay daneeyaan. Iyo, xayeysiis loo wada dhan yahay ayaa kor u qaaday 23-dhibcood ujeedo iibsi oo dhex mara macaamiisha ka tirsan Gen Z, haddii qofka la kulma xayeysiisku uu matalay iyo in kale, sida laga soo xigtay Microsoft, taasoo la macno ah in suuqgeynta loo wada dhan yahay ay kaa caawin karto inaad sidoo kale wado marinka iibka.
Si aad u sii kordhiso fahamkaaga oo aad u xoojiso fariintaada, waxaanu diyaarinay liis agab ah oo u adeegi kara aasaaska dadaalka suuqgeynta loo dhan yahay ee astaantaada.
Ku-tiirsanaanta xukunkaaga markaad xisaabinayso eexdaada qarsoon waxay la macno tahay inaad tahay garsooraha iyo xeerbeegtida, taasoo u horseedi karta jimicsi is-jiidjiid ah. Taa baddalkeeda, isku day agabka sida Harvard's Implicit Association Test (IAT).
Natiijo ka soo baxday Imtixaanka Ururka Daahsoon ee Harvard.
IAT waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato eexdaada qarsoon ee qaybo badan, sida jinsiga iyo shaqada, midabka maqaarka, diinta, naafanimada, jinsiga, miisaanka, da'da iyo in ka badan. Marka aad qaadato IAT, la wadaag kooxdaada si qof kastaa uu isha ugu hayo sida eexdooda uga dhigi karto inay galaan ololahaaga suuqgeyneed.
Ilaha suuq-geyneed loo dhan yahay ee ka yimid Dhulka Matoorka Raadinta
Sida baahida suuqgeyn loo wada dhan yahay ay kortay, anaga, tifaftirayaasha goobta Mashiinka Raadinta iyo kooxda barnaamijka ee ka dambeysa SMX, waxaan u abuurnay tiro agab ah oo summadaha si ay u tixgeliyaan marka ay dhisayaan isku-darka iyo kala duwanaanshaha ururadooda iyo ololahooda.
5 siyaabood oo kor loogu qaado ka mid noqoshada ururkaaga suuqgeyn: Dib u soo koobid Dr. Lauren Tucker's 2021 SMX kalfadhiga soo socda, kaas oo ay kula wadaagto ka mid noqoshada-habka kowaad ee kor u qaadida kala duwanaanshaha ururada dhexdooda.
Qiimaha iska indha-tirka gelitaanka shabakada: Goobaha aan u hoggaansanayn waxay u nugul yihiin dacwooyinka, laakiin SEO-yada ayaa kaa caawin kara ilaalinta iyaga oo u doodaya helitaanka, taas oo u adeegi karta dhegeystayaasha kala duwan iyo sidoo kale yoolalka ganacsigaaga.
(Video) Wax ka qabashada kala duwanaanshaha, qorista iyo ku-haynta hay'adaha iyo kooxaha suuq-geynta: Dood-cilmiyeed ka kooban CJ Bland, Zenia Johnson iyo Jackie Leuing oo ku saabsan sababta kala duwanaanshuhu ugu fiican yahay ganacsiga, waa maxay ballan-qaadka ula-kaca ah ee kala duwanaanshaha, sinnaanta iyo ka mid noqoshada (DE&I) dadaallada u eg. iyo sida shaqaaluhu u bilaabi karaan isbeddelka shirkadahooda.
(Video) Microsoft's "The Download The" Episode 8: Search Engine Land Editor George Nguyen wuxuu la fadhiyaa Microsoft's Nora Xu wada hadal ku saabsan muhiimada ay leedahay ku darida suuqgeynta ka dib markii ay bateen dambiyada nacaybka ee ka dhanka ah Aasiyaanka Ameerika.
Nora Xu iyo George Nguyen waxay ka wadahadleen baahida suuqgeyn loo dhan yahay ee Soo dejinta Microsoft.
Dhulka Mashiinka Raadinta sidoo kale wuxuu soo bandhigaa abaal-marin sanadle ah oo loogu talagalay Hormarinta Kala-duwanaanshaha iyo Ku-Dridda Suuq-geynta Raadinta si loo aqoonsado shakhsiyaadka iyo hay'adaha u horseedaya isbeddel togan ee bulshada raadinta. Ku guuleystayaasha 2021 waa Rejoice Ojaiku, shaqadeeda aasaaska B-Digital, "Madal suuqgeyn dhijitaal ah oo loogu talagalay soo bandhigista iyo dhiirigelinta kartida Black," iyo hasOptimization, oo ah wakaalad fadhigeedu yahay New Hampshire oo dadaalkeeda suuqgeyneed ay kaabayaan shaqadooda labadaba ka mid noqoshada. iyo kala duwanaanshiyaha dhinacyo badan oo diiradda la saaray.
Waxaan halkan ku dhejin doonaa isku xirka markaan bilowno magacaabista soo socota Hormarinta Kala-duwanaanshaha iyo Ka mid noqoshada Abaalmarinta Suuqgeynta Raadinta - waa xor in la magacaabo shakhsiyaadka iyo ururada labadaba.
Tilmaamaha suuqgeynta loo dhan yahay
Google iyo Bing, goobaha raadinta ee udub dhexaad u ah ololayaal badan, waxay aqoonsadeen qiimaha iyo baahida suuqgeyn loo dhan yahay iyagoo daabacaya agabkooda mawduuca.
Suuqgeynta Microsoft oo leh Buug Ciyaareed Ujeedo: Waxaa loo heli karaa soo dejin bilaash ah, Suuqgeynta Ujeeddada Playbook waa mid ka mid ah ilaha ugu dhammaystiran ee tirakoobka suuqgeynta loo dhan yahay (kaas oo kaa caawin kara inaad hubiso iibsashada fulinta) iyo talooyin. PDF-ga 101-bog wuxuu u qaybsan yahay saddex meelood oo muhiim u ah suuq-geyn (mas'uuliyadda, qiyamka iyo ka mid noqoshada) wuxuuna daboolayaa dad badan oo dhagaystayaal ah.
Aragtida Suuqgeynta Loo Dhanyahay ee Google: Waxaa laga sameeyay casharadii Google-ku bartay markuu bilaabay dhaqamada suuqgeyneed ee loo dhan yahay, xaruntan kheyraadku waxay leedahay xeelado lagu dhisayo kooxaha, samaynta doorashooyin hal abuur leh oo loo dhan yahay, ku darida ka mid noqoshada istiraatiijiyadaada iyo sidoo kale aragtida dhagaystayaasha si ay u caawiyaan baabi'inta fikradaha qaldan hal-abuurkaaga.
Tilmaamaha luqadda loo dhan yahay
Abuuritaanka jawi soo dhaweyn leh oo loogu talagalay dhagaystayaal kala duwan waxay ka bilaabataa luqadda fariimahayaga ku jira. Hoos waxaa ah liis hagayaal luqadeed oo ka socda hay'ado kala duwan kuwaas oo kaa caawin kara inaad hubiso ka mid noqoshada hantidaada iyo waxa ku jira.
Luqadda Loo Dhanyahay ee LinkedIn ee Suuqgeeyayaasha: Tilmaan-bixiyahan jeebka waxa uu bixinayaa kooban oo ku saabsan tixgelinta ka mid noqoshada fariimahaaga iyo aqoonsiga sumadda.
Liiska ereyada horumariyaha ee Google: Hagaha qaab-dhismeedka dukumeenti horumariyaha waxa uu ka kooban yahay beddelaad badbaado leh oo loogu talagalay ereyada eexsan, sida adeegsiga “addoon,” “xigmad qabiil” iyo in ka badan.
Hagaha Luqadda Loo Dhanyahay ee Jaamacadda Waqooyi-Galbeed: Tusaha ujeeddada guud waxa ay ka kooban tahay sharraxaadaha sababta luqadda qaarkood loogu tixgaliyo ka-reebis ama eex, iyo sidoo kale weedho beddel ah oo la isticmaalo.
Tixraaca Tixraaca Warbaahinta GLAAD: Waxaa loogu talagalay in ay isticmaalaan saxafiyiinta, hagaha GLAAD waxa uu diiradda saaraa luqadda sida ay khusayso bulshada LGBTQ.
Helitaanka shakhsiyaadka kala duwan ama kuwa ku tiirsan tignoolajiyada caawinta waxay inta badan u arkaan suuqgeynayaashu inay tahay "shaqo qof kale", laakiin ururada loo dhan yahay waxay aqoonsan yihiin in masuuliyadda ay wadaagaan dhammaan. Waa kuwan qaar ka mid ah agabyada kaa caawin kara inaad qiimeyso oo aad hagaajiso gelitaanka boggaaga, iyadoo ay suurtogal tahay inay u furto dhegaystayaal cusub sumaddaada oo kaa ilaalinaysa dacwadaha la xidhiidha ADA.
Qiimaha iska indha-tirka gelitaanka mareegta: Falanqaynta cawaaqibka ka dhalan kara ka-fiirsiga gelitaanka mareegta.
10 mabaadi'da helitaanka dhijitaalka ah ee suuqgeeyayaasha casriga ah: Liiska mabaadi'da gelitaanka ee muhiimka ah oo ay tahay in ay fududaato in la fuliyo.
W3C's Web Content Guidelines Guidelines (WCAG): Waxaa soo saartay World Wide Consortium iyada oo ujeedadu tahay in la bixiyo hal halbeeg oo gelitaanka macluumaadka mareegaha, WCAG waxa ay sharaxdaa sida loogu fududeeyo macluumaadka si ay u galaan dadka naafada ah.
Suuqgeynta loo dhan yahay ee ololahaaga
Goobo badan ayaa soo kordhiyey habab ganacsiyadu u soo bandhigaan kala duwanaanshahooda. Hoos waxaa ku yaal maqaallo ka hadlaya sifooyinka aad isticmaali karto si aad isla markiiba ugu darto curiye ka mid ah xayaysiisyadaada ama joogitaankaaga internetka.
Xayeysiiska Microsoft wuxuu bilaabay Suuqgeynta oo leh astaamo Ganacsi Ujeedo. Shirkaddu waxay markii dambe ku dartay sifooyin ganacsi oo Aasiya-, Laatiin-, Haween ay leeyihiin iyo sidoo kale saaxiibtinimada-macaanka.
Yelp waxay soo bandhigaysaa sifo ganacsi oo Aasiya leh oo la raadin karo. Shirkaddu waxay kaloo ku dartay sifo LGBTQ leedahay; sifada labaduba waxay ku biiraan sifooyinkii hore u jiray ee ay lahaayeen Dumarku, Madaw-ku leeyihiin iyo sifada profile-ka Latinx.
Profile Business Google wuxuu ku darayaa summada "Haweenka ay hogaamiyaan" iyo sifada liiska. Sifooyinka "Ruug-caddaaga-hoggaaminayo" iyo "Black-leaned" ayaa sidoo kale diyaar u ah liisaska maxalliga ah.
Kheyraadkan waxaa loo cusboonaysiin doonaa si joogto ah. Haddii aad hayso jawaab celin, soo jeedin ama agab aad soo gudbiso, fadlan iimayl u soo dir gnguyen@thirddoormedia.com.
Arrimaha gelitaanka Console Search Google ayaa si buuxda loo xaliyay shan maalmood ka dib
Cusboonaysiinta dib u eegista badeecada Google Diisambar 2021 waa la dhameeyay